Hot Pot City | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
Hot Pot City | Mayangone
Hot Pot City စားသောက်ဆိုင်ကို အမှတ် ၃၃ ၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ နေရာထိုင်ခင်းမှာ Customer 200 နီးပါး တစ်ပြိင်နက်စားသုံးနိုင်မှာ ဖြစ်သလို ကား ထားရန်နေရာမှာလည်း အလွန်ကျယ်ဝန်းလှပါသည်။ အမျိုးအစားပေါင်း ၈၀ကျော်ရှိတဲ့ အသားလွှာ ၊ ပင်လယ်စာ၊ အသီးအရွက်၊ အအေး ၊ အစာပြေအကြော်အလှော် ၊ ရေခဲမုန့်၊ အအေး ၊ အပူ ၊ အချိုပွဲ စသည်တို့ကို ဘူဖေးပုံစံ စိတ်ကြိုက်စားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အရသာကလည်းအထူးကောင်းမွန်လှပါတယ်။ ဆိုင်အပြင်အဆင်မှာလည်း အထူးသပ်ရပ်လှပကာ ခေတ်မှီဒီဇိုင်းများဖြင့် ပုံဖေါ်ထားပါသည်။ ဟင်းရည် အနေဖြင့် အချို ၊ အစပ် ၊ ချဉ်စပ် သုံးမျိုးစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အရသာမှာလည်း အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် Family Party များ၊ Group Party များသီးသန့်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရန် ကျယ်ဝန်းတဲ့ Private Room များလည်းရှိပါသည်။ မန်ဘာကဒ်များလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Promotion အစီအစဉ်များလည်း စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ Buffet Hot Pot ကောင်းကောင်းကို မိသားစု (သို့) သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးစားသုံးနိုင်မှာဖြစ်လို့ လာရောက်လည်ပတ်စားသုံးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
သီးသန့်အခန်း | ကားရပ်ထားရန်နေရာ | လေအေးပေးစက်
No. 33, Kyike Wine Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon.
အနီးအနား ရဲဘော်ဟောင်း မှတ်တိုင်2မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
K65 Korea Food Court
Fresh Thai ( 8 Mile )
Kaung Kyaik Biryani & Cold Drink (MYG-2)